Ho an’ny teto an-drenivohitra, manokana dia tetsy Amparibe no nisantarana izany, hetsika niarahana tamin’ny minisiteran’ny fahasalamam-bahoaka izay mpikarakara. Tanjona ny hahafahana mamita vaksiny ireo zaza latsaky ny dimy taona miisa 2.542.712 ao anatin’ireo distrika miisa 55 ireo. Mpiasan’ny fahasalamana miisa 1.695 no indray nahetsika nanomboka omaly miampy mpanentana ara-pahasalamana 32.830. Hampiavaka ity andiany faha-15 ity raha tsiahivina ny fisian’ny ekipa manokana hitety ireo sekoly, toeram-piantsonan’ny fiarakodia, ny tsena ary ny isan-tokantrano. Nilamina ny fizotry ny fanaovam-baksiny omaly andro voalohany tamin’ny ankapobeny.